ကျွန်တော်နဲ့သူ သိပ်ချစ်မိသွားကြတာ အတော်လေးတော့ ထူးဆန်းနေနိုင်ပါတယ်..။ ပြန်ပြောပြရမယ် ဆိုရင်လည်း စကားလုံးတွေက သိပ်တော့မရှိပြန်ပါဘူး။ နှလုံးသားထဲကို အလိုလို ရောက်လာပြီး နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ အခိုင်အမာ သန္ဓေတည်သွားတာမျိုးလေးပါပဲ..။ ကျွန်တော့်ခြေတွေ သူ့ဆီ လှမ်းမသွားခဲ့သလို သူလည်း ကျွန်တော့်ကို မကမ်းခဲ့ပါဘူး..။ ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတာက ကျွန်တော်တုိ့ ဆုံမှတ်တစ်လေးခု အပေါ်မှာ အတူတူ ရပ်မိသွားကြတယ် ဆိုတာပါပဲ..။
ရင်ခုန်စရာ သိပ်ကိုလှပတဲ့ ဆုံမှတ်လေးပေါ်က စက်ဝိုင်းလေး တစ်ခုထဲမှာ ရပ်နေတဲ့ ခြေထောက်လေးနှစ်စုံ ရှိနေပါတယ်..။
အခိုင်အမာ အမှတ်တရ ရှိနေစေတဲ့ အရာတွေကတော့ ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင် အများကြီးပဲပေါ့...။ သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် နှစ်လိုဖွယ်အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဖြစ်သလို သူကလည်း ကျွန်တော့် အမူအကျင့်တွေကို မြတ်နိုးပေးတတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ့မှာ တူတဲ့ အလေ့အထလေးတွေ အတော်များပါတယ်..။ အတူညီဆုံး မူဟန်တစ်ကွက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးလုံး ပေပေတေတေနဲ့ လမ်းတွေလျှောက် နေတတ်ကြခြင်းပဲပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဆုံဖြစ်ကြတိုင်း တစ်ယောက်ပုံစံ တစ်ယောက်ကြည့်လို့ ရယ်မောမိကြတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အပေါ်ယံမျက်လုံးတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစာဖတ်ဖို့ မကြိုးစားသလို ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေကို မီးရှို့ကာ ပြာချထားတတ် ကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်...။
ငွေကြေး ဂုဏ်ပကာသန အရှိန်အဝါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အာရုံဝင်စားဖို့ မတတ်ကြသူတွေပါပဲ..။ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက် ကမ်းပေးလိုက်တာနဲ့ အပြုံးလက်လက်လေးနဲ့ သူ့လက်ဖဝါးလေးကို လာထည့်ပေးတတ်သူဟာ ကျွန်တော့်သူပဲပေါ့။ ထွေထွေထူးထူး ကြိုးညှိစရာ မလိုပါပဲ အော်တိုလေး ကာရံညီသွားကြမြဲပါပဲ..။ သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာ တောက်ပြောင်ပြောင် အဝတ်စားမျိုးကို မုန်းတီးခြင်းဋီကာချဲ့လို့ အထူးအဆန်းနဲ့ အရောင်တွေအကြောင်း အလုအယက် အတင်းပြော တတ်ကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ ဖွာကျဲကျဲဆံပင်တွေ ကိုယ်စီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရောင်ပျယ် ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ဖရို့ဖရဲ ဝတ်ရခြင်းကို ခုန်မင်တတ်သူတွေပါ။
ငြိမ်သက်နေရာကနေ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရုတ်တရက် နှုတ်ကထုတ်ဆိုမိတိုင်း သူလည်း ကောက်ခါငင်ခါနဲ့ အဲ့ဒီသီချင်းကိုပဲ ဆိုညည်းလိုက်တာမျိုး တူနေတတ် ပြန်သေးတယ်..။
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေ ကျွန်တော်နဲ့ သူ့ကြားမှာ ခဏခဏ ကြုံရတတ်ပါတယ်..။ လူတွေကြားထဲမှာ တိုးဝှေ့ဆွဲခေါ်ရင်း သူ့လက်လေးကို တင်းနေအောင် ဖျစ်ညှစ်လိုက်ရင် သူက သူမှီတဲ့ ကျွန်တော့် မေးစေ့ကို ခေါင်းလေးမော့ပြီး ဖြတ်ကနဲ နမ်းတတ်တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်..။ ရှုပ်ပွနေပြီးသား သူ့ဆံနွှယ်တွေကို မျက်လုံးတွေဖုံးတဲ့အထိ ကျွန်တော် စနောက်ကာ ဖွတတ်တဲ့အခါတိုင်း ဂျစ်ပေပေ မျက်စောင်းနဲ့ ဝေ့ကြည့်တတ်သေးတယ်..။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းပါးလေး တွေကတော့ ပြုံးနေတာပါပဲ...။
သူ့ရဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လေး အပြုံးလေးတွေ မြင်နေရရင် ကျွန်တော်ကျေနပ်နေသလို ကျွန်တော် ပျော်နေတိုင်းလည်း သူ့ဘဝ.. လို့ ကဗျာဆန်ဆန် ပြောတတ်သေးသူပေါ့..။
ကျွန်တော်သူ့ကို ချစ်စရာ အမည်းရောင် ဂစ်တာလေးတစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးဖူးပါတယ်..။ သူတစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော့်ဆီကရတဲ့ ဂစ်တာလေးနဲ့ စကားတွေ ပြောတတ်တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောရင်း ရှက်စနိုးနဲ့ ရယ်မောတတ်ပြန်သေးတယ်.။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ဂစ်တာလေးကို အထီးအမခွဲရင်း သားလေးလား..! သမီးလေးလား..! လို့ ငြင်းခုန် တတ်ကြပါသေးတယ်..။ “ဟိုမကျ ဒီမကျ အခြောက်လေးများ ဖြစ်နေရင် ဒုက္ခ...” လို့ ကျွန်တော် နောက်ပြောင်ရင်တော့ သူမကြိုက်ပါဘူး။ အဲ့လို စနောက်တိုင်းလည်း ကလေးတစ်ယောက်လို စိတ်ကောက်ပြန်တာ ကျွန်တော့်သူ... ပဲပေါ့..။ ကြာရှည် စိတ်မကောက်တတ်တဲ့ သူ့စရိုက်လေးကိုလည်း ကျွန်တော် အရမ်းကို ချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ သူစိတ်ဆိုးအောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခဏခဏ စတတ်သူပါပဲ..။
ကျွန်တော်တို့ ချစ်သူ့သက်တမ်း တလျှောက်လုံးမှာ ကြီးကြီးမားမား တစ်ခါမှ ရန်မဖြစ်ဖူးကြပါဘူး..။
ကျွန်တော်နဲ့သူ့ကြားမှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကို သူများတွေ မြင်သာအောင် ချပြဖို့မလိုအပ်ဖူးလို့ ခံယူထားကြသူတွေပါပဲ.။ သူဟာ ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကျွန်တော့် အတွက် အရမ်းလိုအပ်တဲ့ တိုင်ပင်ဖော် သူငယ်ချင်းဆိုလည်း မမှားပြန်ဘူး..။ ကျွန်တော့် သူ့ကို အစ်မတစ်ယောက်လို လေးစားမြတ်နိုးသလို ကျွန်တော့် ညီမငယ်လေး တစ်ယောက်လိုလည်း သူ့ကို ပူပန်တတ်သေးတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ပုံအပ်လက်ချင်းတွဲလို့ လမ်းတွေ ဆက်လျှောက်နေကြတာပါပဲ..။
မိခင်တစ်ယောက်က ကလေးတစ်ယောက်ကို ယုယသလိုမျိုး သူပေးတဲ့ အကြင်နာတွေ ရတတ်ချိန်တိုင်း မျက်ရည်ဝဲ လောက်အောင်အထိ ကျေးဇူးတင် ကြည်နူးရသူဟာ ကျွန်တော်ပါပဲ..။
လူတွေကြားထဲ လက်တွဲသွားရင်း ကျွန်တော့်ကို လှည့်ကြည့်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ တွေ့ခဲ့ရင်လည်း သူဟာ အပြုံးမပျက် တတ်သူမျိုးပေါ့..။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကို ဂရုတစိုက်ရှိတတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေ ရှိနေရင်တောင် ဝန်တိုစိတ်ဆိုတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်တတ်ပါဘူး..။ ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်နဲ့ သူ့ရဲ့ အပြန်အလှန် အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်ပါပဲ..။ ကျွန်တော်နဲ့သူ ကိုယ်ဆီအိမ်ပြန်ဖို့ လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်ချိန်တွေမှာ “စိတ်ချမယ်နော်...” လို့ ကျွန်တော်ပြောတိုင်း.. သူကလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်ရင်း ခေါင်းလေး ညိတ်ပြတတ်ပါတယ်..။
တခါတလေတော့ ခေါင်းကိုငဲ့စောင်းလို့ မျက်လုံးလေးတွေစွေပြီး ချစ်စနိုးလုပ်တတ်တဲ့ သူ့မျက်စောင်းလေးကို ချွင်းချက်အဖြစ် ကျွန်တော် ရတတ်ပါသေးတယ်..။
ကျွန်တော်သူ့ကို ဘယ်အရာမျိုးမှာမှ ပိတ်ပင်တားဆီး ချုပ်ချယ်တာမျိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး..။ ပွင့်လင်းထက်ြမက်တဲ့ သူ့စိတ်လေးကို ကျွန်တော်အလေးထား အသိအမှတ်ပြုလို့ မြတ်နိုးပါတယ်။ သူဟာ အမိန့်ပေးခံရခြင်းကို မုန်းသလို သူ့ဘောင်လေးထဲမှာ ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်လှုပ်ရှား နေခြင်းကို သူကိုယ်တိုင် လေးစား တန်ဖိုးထားတတ်တာကို ကျွန်တော်သိနေလို့ပါ..။ ကျွန်တော်တစ်ခုခုကို အလွန်အကျွံမဖြစ်စေဖို့ သူသတိပေးတတ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူနားလည်လက်ခံအောင် ပါးပါးလေးလှစ်ကာ ပြောပြနားချမိ တတ်ပါတယ်..။
သူသတိပေးသမျှကို ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်နားထောင်သလို သူကလည်း ကျေကျေနပ်နပ် ဆင်ချင်နေထိုင် ပေးတတ်လို့ ကျွန်တော်သူ့ကို အချစ်ပိုရပြန်တာပါပဲ..။
သူဟာ ကျွန်တော့်ကို အတိုင်းထက်အလွန် နားလည်ပေးတတ်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်အားမရ ဖြစ်မိတတ်တယ်..။ သူစိတ်ညစ်သွားမှာမျိုးကို ကျွန်တော် မလိုလားပါပဲ မတတ်သာတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်မှာ နင်းလျှောက်ရတိုင်း ကျွန်တော့် စိတ်ခြေလှမ်းတိုင်းက လေးပင် တွန့်ဆုတ်နေတတ်တာ ဘယ်သူမှ သိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ သူ့ကို ကျွန်တော် စိတ်မဆင်းရဲစေချင်တာ ကျွန်တော်သာ အသိဆုံးမို့ပါ..။ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ သူရှိကို ရှိနေမှဖြစ်မှာပါ..။ ကျွန်တော် သူ့ကို အဲ့လောက်ထိ လိုအပ်ပါတယ်..။
သူ့ဆန္ဒ သူ့အလိုမှန်သမျှကို အလိုက်တသိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သူ့ကို ရည်းစား ဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့ဖူးလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုး မေးဖို့စိတ်မဝင်စားသလို သူသိနေတဲ့ ကျွန်တော့် အတိတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကျွန်တော့်ကို စိတ်ရှုပ်အောင် မလုပ်တတ်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ပစ္စုပ္ပန်ကို မြတ်နိုးပါတယ်..။ “ဒီနေ့..” ဆိုတာကို ချစ်ပါတယ်...။ “ဒီနေ့..” ကျွန်တော် သူ့မျက်နှာလေး ပြုံးသွားအောင် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ တွေးသလို သူကလည်း “ဒီနေ့..” ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လို ယုံကြည် နားလည်မှုတွေ ထပ်ပေးနိုင်မလဲ ကျိုးစားနေတာကို ကျွန်တော်သိနေပါတယ်..။
သူ့အရိပ်တွေနဲ့ “ဒီနေ့..” ဆိုတာကို ကျွန်တော် ဆုပ်ကိုင်နိုင်သလို ကျွန်တော့် မေတ္တာတွေနဲ့ ဒီနေ့လေးမှာ သူ့စိတ်တွေကို အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခွင့်လေး ပေးနေပါရစေ..။
ကျွန်တော့်အတွက် ဒီနေ့ဟာ လှပပြီး သူ့အတွက် သူပိုင်ဆိုင်ရမဲ့ ဒီနေ့လေးမှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လေး ပြုံးနေနိုင်ပါစေ...။ ကျွန်တော်တို့ကို မနက်ဖြန်အကြောင်းလေး ခဏလောက်တော့ မေ့ထားခွင့်ပေးပါ..။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ဘဝအတွက် လုပ်ဆောင်စရာတွေ အမောတွေ အများကြီးရှိနေသေးတာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် သိထားကြပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့... ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်ပြောပါရစေ.... ကျွန်တော်နဲ့သူ့ကို မနက်ဖြန်တွေအကြောင်း ဒီနေ့မှာ မေ့ထားနိုင်ဖို့ ခဏလေးတော့ ခွင့်ပြုပေးကြပါ...။
ဒီနေ့လေးမှာ ကျွန်တော် သူ့ပါးလေးတွေကို နူးညံ့ကြင်နာစွာနဲ့ ဖွဖွလေး နမ်းပါရစေ..။
သူကလည်း သူ့လက်ဖဝါး နွေးနွေးလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်ထား ပါလိမ့်မယ်..။
ဒီနေ့လေးကို ကျွန်တော်နဲ့သူ ကြည်နူးစွာနဲ့ သိပ်ကို လိုလားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီး “ဒီနေ့..” လေးကို သာယာငြိမ်သက်စွာနဲ့ ချိုမြိန်နာရီတွေပေါ်မှာ တွဲခိုစီးလို့ နေနေပါရစေ..။
ချော့ကလက်နံ့လေးတွေ ထုံအီနေမဲ့ ရောင်စုံအိပ်မက် လှလှလေးတစ်ခုကို အတူတူမက်ရင်း “ဒီနေ့..” လေးကို ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးပါ....။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် သိပ်ကို မျှော်လင့်ခဲ့ကြတဲ့ “ဒီနေ့..” လေး ကို ကျွန်တော်နဲ့.... သူ.... .... .... .... ....!!!!
တူငယ်...တူမငယ်၊ မောင်ငယ်...ညီမငယ်လေးတွေအတွက် ဗာလင်တိုင်း လက်ဆောင်အဖြစ် အမှတ်တရ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ရေးဖွဲ့တာပါ။ ချစ်တတ်သူတိုင်း နူးညံ့ ရင်ခုန်သံတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာ ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေ....။
အချိန် 12:07 PM
နူးညံ့ညင်သာစွာ စီးဆင်းလာတဲ့ အချစ်က
ဒီနေ့လေးမှာ ပိုလို့ သိမ်မွေ့နေမှာပါမမခင်လေး.
အစ အပေါ်ဆုံးကနေဖတ်လာတာ ကိုရင်ကြီးရေးတာ မှတ်နေတာ .. ပိတ်မှ မခင်လေး ဖြစ်နေတာ သိတော့တယ်။ " ဒီနေ့" ဒိုင်ယာရီပေါ့ ။
နူးညံ့သော သို့သော် ခိုင်မာသော
တောက်ပရွှန်းစိုသော သို့သော် အရောင်အဆင်းကင်းသော
တွဲဖက်တူယှဉ်သော သို့သော် အပိုင်းအခြားမဲ့သော .....
စာထဲကလို ရီးစားလေး၁ယောက်တော့ အမြန်ရှာမှပါ။ အဲ (ဒိနေ့) အတွက်
ကြည်နူးစရာ ပကာသနမဖက်တဲ့ မေတ္တာသက်သက် အတွဲလေးမို့ ဖတ်ရင်းနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ခံစားသွားတယ်
မလေးအတွက်လည်း ပျော်စရာ ချစ်သူများနေ့ ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်
ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စရာ ရသလေးနဲ့ ချစ်စရာ ပို့စ်လေးပါ...
ဖေ့ဘွတ်ပေါ် shareချင်လို့ ခွင့်ပြုပါဦးနော်... :-)